November 2017 - Shop
Shop > All Articles > 2017 > November
JCGV အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း Shop.com.mm Black Friday မှာ ထပ်ဆောင်းလျှော့ဈေးတွေ ရယူလိုက်ရအောင်…၂၀၁၇ ခုနှစ် Black Friday ဈေးရောင်းပွဲတော်အတွင်း Shop.com.mm နှင့် JCGV တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်0330
Watch movie, Get voucher code & Enjoy Shopping : Collaboration of Shop.com.mm & JCGV during Black Friday 20170352
Black Friday 2017 ကာလအတွင်း Facebook မှာ QR Code scan ဖတ်ပြီး အပို ၅၀၀၀ ကျပ်လျှော့ဈေးကူပွန် ရယူလိုက်ရအောင်…0293
How to get extra 5,000 Ks Discount with QR Code during Black Friday 20170327
Shop.com.mm ရဲ့ Black Friday 2017 ဈေးရောင်းပွဲတော်0260
Stay alert !!! Shop.com.mm Black Friday 2017 will be brought to you in few days!0272
KFC မှာကြက်ကြော်စားရင်း Shop.com.mm Black Friday မှာ ထပ်ဆောင်းလျှော့ဈေးတွေ ရယူလိုက်ရအောင်…၂၀၁၇ ခုနှစ် Black Friday ဈေးရောင်းပွဲတော်အတွင်း Shop.com.mm နှင့် KFC တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်0311
The KaungHtet November 18, 2017 9:30 am November 18, 2017
KFC ချစ်သူတို့အတွက် အထူးသတင်းကောင်း…မကြာမီမှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ့် Black Friday ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးအတွင်း Shop.com.mm မှ KFC နဲ့ပူးပေါင်းပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အထူးအစီအစဉ်လေးတစ်ခု ယူဆောင်လာပါတယ်။ Foodie customer တွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်အနေနဲ့ Shop.com.mm နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ …
Eat, Get voucher code & Enjoy Shopping : Shop.com.mm & KFC brings beneficial shopping to our customers during Black Friday 2017!0315
The KaungHtet November 18, 2017 1:00 am November 18, 2017
Very good news for foodies who love KFC! Black Friday is coming very soon and we are so excited to …
Black Friday 2017 ဈေးရောင်းပွဲတော်အတွင်း Visa card နဲ့ ဘယ်လိုငွေပေးချေကြမလဲ ?0275
Black Friday 2017 ဈေးရောင်းပွဲတော်ကာလအတွင်း ဈေးဝယ်သူတွေ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် Shop.com.mm မှ Visa card ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ Visa ကဒ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းက ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လွယ်ကူမြန်ဆန်စေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ …
How to pay online with Visa card during Black Friday 20170420
To provide an alternative payment system, Shop.com.mm has cooperated with Visa bringing better prices to our customers during Black Friday …